Mba misy zavatra tsara ve any AFrika? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2007 14:53 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, 繁體中文, 简体中文, English
Izany no fanontaniana miharo fandranitana voarain'i Kizzie, izay mpitoraka blaogy avy any Sudan vao tsy ela:
Tany Amerika izahay ka nasain'izay Jiosy-Amerikana izay mpandalasy mpanoratra ary mpampianatra momba ny zon'olombelona izay hisakafo. Niresaka maharitra izahay momba ny moyen-orient/Silamo/momba ny vahiny/ny zon'olombelona. Nony avy eo dia nasain'ilay profesora nanonaniana zavatra momba an'i Afrika aho satria moa aho avy any sady mahalala zavatra maro momba io kaontinanta mamiko io. Dia izao no nolazainy ahy “Mba misy zavatra tsara mitranga ihany angaha any?”. Tsy haiko izay ilazana ny fihetsem-poko tamin'izay fotoana izay fa toa nifangaro be ihany. Tsy haiko na tezitra na nalahelo. Angamba izy roa. Toa tsapako nionjona tamiko koa ny eritreriny momba ny zava-dratsy mipoitra avy ao Afrika. Nidilotra ny hoditro izany teo am-piezahana nitady izay zava-tsoa ao amin'ilay kaontinantako. Tena mbola tsy tafaverina tamin'ilay izaho aho.
… i Afrika dia tsy darfur, rwanda, tsy diktatiora, tsy fandrosoana, eny tsy SIDA koa.
Miresaka Darfur ihany dia nolazain'i Black Kush ao amin'ny blaoginy ny fikaonan-doha iray momba ny fandriam-pahalemana izay hitadiavana izay hampitsaharana ny fifanandrinana:
Inona marona moa tamin'izay nifanarahana nandritra ny fihaonana no mbola tokony hojerena. Iza amin'ireo vondron'ny mpikomy no nanatrika? Ary ahoana ny momba an'i Abdel Wahid el Nur izay lohan'ny SLM?
Napetrany tao koa ity sariitatra ity:
Little.Miss.Dalu, indray, izay Sudanese mipetraka any Amerika, dia nanoratra lahatsoratra roa mahaliana, ny voalohany dia mikasika ny fanavakavahana amin'ny samy Sudanese, ary ny faharoa dia mikasika azy manokana amin'ny maha Sudanese Amerikana azy.
Hevitra momba ny fanavakavahana:
Tsy hisorona aho eto, na dia hoe tsy hahafaly aza ny hihaino – na ny marimarina kokoah amaky – izay holazaiko. Fa amin'ny ankapobeny, ny Sudanese dia tena tsy mivelatra
… Nanana namana Sudanese Arabo aho fony kely fa nifandona matetika izahay nony tonga teo amin'ny resaka finoana sy volon-koditra, rehefa dinihana dia toa tsy nisy antony satria tsinona mbola ankizy izahay! Fa amin'izao dia tsapako fa ireny ady sy zavatra rehetra nolazainay ireny dia zavatra nalentika tao andohanay avy amin'ny ray amandreny. Indray andro dia nidaroka mafy ankizy iray aho satria nampiasa ny teny hoe abeed/abid [andevo] tamiko izy, ary andro iray hafa koa dia namelaka ankizivavy iray, izay namako ihany, aho satria nolazainy hoe mitovy amin'ny zift (tahaka ny goudron) ny lokon'ny hoditro.
… SUDANESE mitovy daholo nefa izahay.
Momba ny maha Sudanese Amerikana azy:
Izaho alohan'ny rehetra dia mieritreritra ny tenako ho Sudanese, fa eo anatrehan'ireo fianakaviako, izay iezahako iresahana na dia tsy fantatro aza, dia Amerikana tanteraka aho. Ho an'ny Amerikana aty indray, dia ilay Sudanese kely aho. Ho ahy dia na izy roa miaraka na indraindray tsy misy izy (ary izay no mahasosotay an'ity resaka nationalité nationalité ity)
Drima, of The Sudanese Thinker indray dia nanoratra lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Khartoum, a City of Sharp Contrasts” (Khartoum, ilay tananan'ny tsy fitoviana miavaka) mikasika ny fidorohana alikaola sy zava-mahadomelina, fiainam-biby mitranga ao ambadiky ny varavara-mihidin'ity renivohitr'i Sudan.
SudaneseReturnee indray dia faly, na dia hoe sahirantsaina aza niverina nody tao Juba.
Ary avy ao Juba etsy andanin'izany, Doctor Konyokonyo dia nanoratra lahatsoratra mikasika ny SIDA ao atsimon'i Sudan:
Ny zavatra mampalahelo dia misy ny fiolonolonana ary ny ankamaroan'ny tanora dia manasokajy azy ity ho toy ny aretina tsotra rehetra. Izany ve nefa? Efa ela tamin'ny taona 80 tany, dia noeritreretina ho aretin'ny Congolese izy io tao Sudan, indrindra fa ny mpivarottena sns. Ireo izay mandalo amin'ireny toerana ireny ihany no voany. Mampalahelo fa mbola izany no mitranga any atsimon'i Sudan.
Tsy vitan'ny tanora ny mifehy tena, ilay hoe mba mihanona amin'ny vadiny. Ary ny Kapaoty? Matetika dia tsy mahita! Eny e, misy koa ireo izay mieritreritra hoe manala ny tsiron'ny fahafinaretan'ny nofo ilay izy!
Zoulcolm X indray dia tezitra noho ny manjo ny Sudanese any Egypt:
Nankarary ny foko mihitsy ny vaovao mikasika ny miaramila ejipsiana izay nitifitra ireo sodané niampita ny sisin-tany ho ao Israely. Satria nandritra ny taona lasa dia anjatony maro ny ejipsiana no tonga hiasa ao Khartoum, lasan'izy ireo ny asa madinidinika toa ny fanamboaran-trano, restaurants… ary ireo mpiasa ireo dia tsy natokana tamin'ny ghetto fa nilamina tsara, azo lazaina hoe, niaina fiainana tsara.
…Ireo sudanese mpila ravinahitra izay eny andalambe eny Cairo aza moa mbola mijaly mafy noho ireo izay voatifitra teny amin'ny sisin-tany, dakain'ny mpitandro filaminana ejipsiana, na miatrika ny fanavakavahana ataon'ny ejipsiana. dia mifamono koa ry zareo, na tsy hino ahy aza ianareo, dia efa manomboka manangana vondron'olondratsy kely ny mpivahiny sudanese ao Cairo.
Path2Hope indray kosa dia malahelo noho ny nandaozan'ireo olona izay fantany izay maty vokatry ny tsy fahaizan'ny mpitsabo ao Sudan:
Nanao ny fitarafana azy ity mpisoloky, dokotera mantsy azafady, rehefa avy nandoa ny vola nilaina tamin'ity “asa” izy.
… dia izao no vokatry ny fitarafany, “nisy zavatra nahakenda azy”.
… Andro vitsivitsy taty aoriana dia tonga tany Jordan izy ireo ary nokapokapoin'ny dokotera. Soa ihany fa tsy kenda izany mihitsy izy fa ny fanafody nohaniny no tsy zakan'ny vatany izay efa antitra ihany ka nahatonga fahavoazana saingy mbola misy fanantenana – misy foana. Tamin'ny farany dia hita fotsiny hoe tsy ampy kalsioma izy.
… Efa ho iray volana izao no nahafaty azy, tsy zakan'ny vatany intsony ny vokatry ny fanafody diso. Ina lil-lah wa inah ilehi raje'oun (an'Andriamanitra isika ka any aminy ihany no hiverina)
Nisy kosa nefa zavatra mba nahafaly an'i Path2Hope :
Nitsangatsangana tao an-tanàna aho dia naheno fofona “hilu-mur’ (zava-pisotro Sudanese) ary izay trano rehetra nidirako dia nisy “shermoot” nihantona nahahy (hena izay hahahy ary tetehina hifangaro amin'ny sakafo) ireo rehetra ireo dia mampatsiahy fa efa ho avy ny Ramadan. Tiako foana ny Ramadan, misy zavatra mahatalanjona tokoa ity volana ity indrindra rehefa sendra mipetraka amin'ny firenena Silamo ianao.